A patent ekpughe iPhone na interface maka mmiri n'okpuru osimiri | Gam akporosis
ya ọtụtụ smartphones ndị dị ugbu a nwere asambodo nguzogide mmiri. Site na afọ ole na ole ruo akụkụ a, ọtụtụ ụlọ ọrụ gbara mbọ inye ngwaọrụ ha ikike iguzogide splas, ájá na ọbụna mmiri zuru ezu n'okpuru mmiri. Ọ dị mwute na IP67 ma ọ bụ IP68 asambodo na-egosi na ekwentị nwere ike "lanarị" ọbụlagodi mmiri na-aga n'ihu, na-emeputa ọ bụla na-agụnye dị iche iche jụrụ na-atụ aro na nke a.
A patent adere nso nso a Apple na-eweta "mmiri" ekwentị mkparịta ụka azụ na mbụ. Afọ ole na ole gara aga, iPhone nọ n'ọrụ fọrọ nke nta ka ọ tọọ usoro maka imewe na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ dabara nke ọma na nke a kwụsịrị ịbụ otu na ndị nrụpụta na-anwale ma mepụta ihe na-enweghị 'mkpali' nke mpụga., ruo mgbe ebighị ebi na-ele anya na ngwaahịa Apple.
1 IP mmiri na uzuzu eguzogide asambodo
2 Kedu ihe ị ga - eme iji smartphone amataghị?
IP mmiri na uzuzu eguzogide asambodo
Ruo ugbu a, mmegide nke ngwaọrụ eletrik na mmiri mmiri ma ọ bụ ájá, na-ekwe nkwa ọ bụla emeputa ekele na «IP» asambodo (Nchedo Ingress). A Norma nke International Electronic Commission (CEI) guzobere site na akpọrọ «IEC 60529 Ogo nke Nchedo«. Na asambodo a, nọmba abụọ na-eso akwụkwọ ozi "IP" chọpụta, ihe mbụ, nke ọkwa nchebe megide nnabata nke ihe ndị siri ike (ájá), na nke abụọ, nke ọkwa nchebe megide nnabata mmiri. Maximumkpụrụ ha kachasị elu bụ 6 na 8, n'otu n'otu.
Imirikiti ekwentị ndị dị n'etiti ma ọ bụ ndị dị elu nwere taa nwere Asambodo IP68. Na tiori asambodo a na-ekwe nkwa ihe abụọ. Nke mbụ bụ na ha nwere a nchebe zuru oke megide uzuzu, nke na-enweghị ike ịbanye n'ọnọdụ ọ bụla. Na nke abụọ, na-ekwe nkwa na iguzogide ego zuru oke ma na-aga n'ihu na mmiri. More kpọmkwem, ọ na-ekwu na: «Ọdụdọ / electronic akụrụngwa ga idi (enweghị ihe ọ bụla filtration) na nmikpu zuru ezu na nke na-aga n'ihu na omimi na maka oge nke onye nrụpụta gosipụtara nke ngwaahịa na nkwekọrịta nke onye ahịa, ma ọ bụrụhaala na ọnọdụ ndị siri ike karị na-esi karịa ndị akọwapụtara maka uru 7 ″.
Dabere na data ahụ, asambodo IP68 ga-emerịrị karịa IP67, nke na-ekwe nkwa nkwụsi ike nke ngwaọrụ ahụ na-enweghị nzacha ọ bụla nmikpu zuru ezu na 1 mita ruo 30 nkeji. Ma ọ na-arụtụ aka omimi na oge akọwapụtara site na onye nrụpụta. Asambodo iche, onye ọ bụla na-emepụta ihe na-agbakwunye ụda nke ezigbo ebipụta na ojiji na anyị ga-enye ngwaọrụ ahụ. Ọbụna ịdọ aka ná ntị na omume ụfọdụ, nke kwesiri ịkwado ngwaọrụ ahụ, si na ikike.
Kedu ihe ị ga - eme iji smartphone amataghị?
Na smartphone anaghị egbochi mmiri, fọrọ nke nta ka ọtụtụ mgbe ọ na-eje ozi ya mere ka anyi ghara inwe nsogbu ma anyi mee ihe mberede. Ọ bụrụ na oge gara aga ị tara ahụhụ ahụmahụ nke smartphone ịdaba na mmiri, ị ga-ama etu ọ "si ewute". Ka ọ dị ugbu a, na mmiri anyị na-ezo na mmiri ozuzo, ma ọ bụ mmiri mmiri na-awụkwasị anyị, na-echegbu anyị nke ukwuu karịa ka ọ dị na mbụ. Ma, Enwere m ike iji IP68 ekwentị amataghị ama dị n'okpuru mmiri?
Dabere na tiori anyị ahụla, asambodo IP68 nwere ike ịgba mbọ hụ na ama ama ama ama ama ama. Mgbe ahụ, anyị na-ahụ nnukwu nsogbu na anyị enweela ike ịnwale ule jupụtara na nkume smartphones. Touchscreens anaghị akpa àgwà otu mmiri ahụ. Naanị arụmọrụ anyị nwere ike iche maka iji ekwentị n'okpuru mmiri nwere ike ịbụ ịse foto. Na mmeghe dị mfe nke ịmepe ngwa igwefoto, ma ọ bụ ịpị bọtịnụ iji see foto siri ike. Site na mkpịsị aka mmiri na ekwentị mikpuru, anyị agaghị enwe ike iji ya mee nke ọma.
Patent nke Apple maka iPhone ekwuputara na ekpughere interface gbanwere ma ọ bụrụ na ngwaọrụ achọpụta na ọ bụ n'okpuru mmiri. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ihe ọhụrụ ewepụtabeghị ụlọ ọrụ siri ike. Nke a nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe iji ngwaọrụ mgbe anyị chọrọ iji ya na mmiri. Ndị nrụpụta ọ ga - elekwasị anya na nguzogide mmiri ka anyị wee nwee ike iji ekwentị anyị n’ọdọ mmiri?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Patent ekpughe iPhone na interface maka mmiri n'okpuru osimiri ojiji
Redmi Band bụ gọọmentị: Ọ na-ekwe nkwa nnwere onwe nke ụbọchị 14